လွတ်လပ်မျှတမှု မရှိသေးတဲ့ တရားရေးမဏ္ဍိုင် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဒီတပတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းမှာ မတရားဖမ်းဆီးခြင်း ခံထားရတဲ့ ဒေါက်တာထွန်းအောင် အမှု၊ ပြစ်ဒဏ်၊ တရားစီရင်ရေး လုပ်ပုံလုပ်နည်း၊ ဆောင်ရွက်ဆုံးဖြတ် ချက်ဆိုင်ရာများကို ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် အာရှလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ အကျိုးဆောင် ရှေ့ နေ ဦးမင်းလွင်ဦး နဲ့ ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်း ဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်း တို့ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတခုမှာ ဥပဒေစိုးမိုးရေး နဲ့ မျှတတဲ့ တရားစီရင်မှုဆိုတာဟာ နိုင်ငံသားတွေအားလုံးရဲ့  လုံခြုံရေးနဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေကို ကာကွယ်ရေးအတွက် အလွန် အရေး ပါပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဇွန်လအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ ဘင်္ဂလီ မူစလင်တွေ ရိုဟင်ဂျာတွေအကြား အထိကရုဏ်းမှာ လှုံဆော်ခဲ့လို့ဆိုပြီး ဒေသခံ မူစလင်အသိုင်းအဝိုင်း ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာထွန်းအောင် ကို နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာ မြန်မာအစိုးရ ခုံရုံးတခုကနေ ထောင်ဒဏ် (၁၁) နှစ် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပြစ်ဒဏ်နဲ့ တရားစီရင်မှုဟာ လုံးဝမျှတမှု မရှိဘူးလို့ ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် အာရှလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ရဲ့  အကျိုးဆောင် ရှေ့ နေတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးမင်းလွင်ဦး ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ မူစလင် အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့  ဥက္ကဋ္ဌဆိုတော့ ဘယ်လိုအသိုင်းအဝိုင်းကို ပြောတာလဲ ခင်များ။ ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်းတို့ကို ပြောတာလား။ ဒါမှမဟုတ် …
အဲဒီလို ခွင့်ပြုတာ၊ တောင်းခံတာ။ ခွင့်ပြုချက် ပေးတာတွေကိုလည်း ကျနော်တို့ မတွေ့ရပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ တရားခံအဖြစ် စွပ်စွဲခံရတဲ့သူဘက်ကနေ သက်သေ အထောက်အထား တင်ပြဖို့ လိုတဲ့အခါတွေမှာ လာရောက်တဲ့၊ တရားရုံးမှာ သက်သေထွက်ဆိုမယ့်လူတွေက လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့် လာရောက်ပြီးတော့ ထွက်ဆိုနိုင်ခြင်း မရှိဘူး။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လုံခြုံမှုမရှိတဲ့အတွက် မသွားလာရဲကြဘူး။ ဒါတွေကို ကြုံတွေ့ရတယ်။ ဒါတွေက မျှတတဲ့ တရားခွင်တခု ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရာမှာ အဓိက လိုအပ်တဲ့အချက် အလက်တွေကို အစိုးရဘက်ကနေ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မပြုနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ ကျနော်အနေနဲ့ ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။
ဦးမင်းလွင်ဦး ။ ။ ဦးထွန်းအောင် က ဘာတွေကျူးလွန်ခဲ့သလဲဆိုတာကို ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုမျိုး သံတွဲမှာ ဗလီဆရာ (၁၀) ဦး အသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မောင်းတောမြို့ မှာ ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲလုပ်မယ်။ မြေမြုပ်သင်္ဂြုလ်ကြမယ်။ ဒါတွေ လုပ်တဲ့အခါမှာ ဆူဆူပူပူ မဖြစ်အောင် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အသီးသီးနဲ့ နကစ၊ စရဖ အထွေးထွေး အုပ်ချုပ်ရေးမှုး အသီးသီးနဲ့ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းပြီးတော့ ဒီ ကိစ္စရပ်တွေမှာ ရပ်ရွာလုံခြုံမှု ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကြားထဲကနေ ဒီလိုမျိုး လူတွေရဲ့  ဒေါသကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ဘဲနဲ့ အရေးအခင်းတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်ပွားတဲ့အခါကြတော့ အာဏာပိုင်တွေဘက်က ဘာကိုအကြောင်းပြသလဲဆိုလို့ရှိရင် ဒီလိုမျိုး ဖြစ်မယ်မှန်း ကြိုတင်သိရက်နဲ့ အာဏာပိုင်တွေကို အကြောင်းမကြားတဲ့အတွက် ဦးထွန်းအောင်မှာ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်နဲ့ အပြစ်ပေးခြင်း ခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ တရားရုံးရဲ့  စီရင်ချက်တွေ၊ အမိန့်တွေကို ဖတ်ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိရှိရပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဦးထွန်းအောင် ကိုယ်တိုင်ဟာ အစောက ပြောခဲ့သလို ဒေသအတွင်းမှာ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဒေသအသိုင်းအဝိုင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုရဲ့  ထင်ရှားတဲ့ ခေါင်းဆောင် တယောက် ဖြစ်တဲ့အပြင် ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေနဲ့လည်း အစောပိုင်းက အတော်လေး သင့်သင့်မြတ်မြတ် ရှိပြီးတော့ ဒေသအတွင်းမှာ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကို အထူးသဖြင့် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့တဲ့လူ မဟုတ်ဘူးလား။
ဦးမင်းလွင်ဦး ။ ။ အရင်တုန်းကတည်းက အရင် နဝတ၊ နအဖ လက်ထက်ကတည်းကိုက ဒေါက်တာထွန်းအောင် က အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဒေသလုံခြုံရေးအတွက် ဆောင် ရွက်ခဲ့ဘူးတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေ တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း တရားရုံးမှာ သူကိုယ်တိုင် အစစ်ခံတဲ့အချိန်မှာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ သိရတယ်။ သို့သော်လဲပဲ ဒီအချက်အလက်တွေကို ထောက်ခံပြီးတော့ ထွက်ဆိုမယ့် သက်သေတဦးတယောက်မှ မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ ပညာရှင်တရားသူကြီး ဦးအေးလွင်ကနေပြီးတော့ သုံးသပ်ပြီး တော့ ဒီအမှုမှာ (၅ ည) နဲ့ စွဲဆိုထားတဲ့အမှုမှာ ထောင်ဒဏ် (၇) နှစ် အပြစ်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါက ဥပဒေအရ သက်သေခံ ဥပဒေအရဆိုရင် တော်တော် မှားယွင်းတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ပြောချင်တယ်။
ဦးမင်းလွင်ဦး ။ ။ အဲဒီတော့ ဦးထွန်းအောင် ကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်း ခံရတဲ့အခါမှာ ဦးထွန်းအောင်ဆီမှာ laptop ကွန်ပြူတာတစ်လုံး တွေ့ပါတယ်။ တယ်လီဖုန်း နှစ်လုံး တွေ့ပါတယ်။ အဲဒီ လက်ပ်တော့ကွန်ပြူတာက ဦးထွန်းအောင်ရဲ့  သမီးဖြစ်တဲ့သူ UNHCR မှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့သူရဲ့  ကွန်ပြူတာဖြစ်တယ်။ အဲဒီ ကွန်ပြူတာထဲမှာက ဒီ ရခိုင်ဘက်ကို ခိုးဝင်လာတဲ့ ရခိုင်ဒုက္ခသည်တွေ ရှိလာရင် ဘယ်လို စီစစ်ရမယ်၊ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ရမှာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မှတ်တမ်းပြုစုထားတဲ့ အချက်အလက်တွေရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ တခါ နယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက် တဖတ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီးတော့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ ပြောဆိုရတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေရှိတယ်။ ဒါတွေက UNHCR ဝန်ထမ်း တယောက်အနေနဲ့ လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီဥစ္စာတွေက ကွန်ပြူတာပေါ်ကဟာတွေက ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရဲ့  ကွန်ပြူတာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ရဲ့  သမီးဖြစ်တဲ့သူ မြနန္ဒာအောင်ရဲ့  ကွန်ပြူတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မြနန္ဒာကိုယ်တိုင်လည်း ပြောတယ်။ ဒေါက်တာထွန်းအောင် က ပစ္စည်းကိုပေးအပ်စဉ်မှာလည်း ပြောတယ်။ သို့သော်လဲပဲ ဒီ ကွန်ပြူတာထဲ မှာ ပါတဲ့အချက်အလက်တွေပေါ် မူတည်ပြီးတော့ အခုလို အပြစ်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ သိရပါတယ်။
ဦးမင်းလွင်ဦး ။ ။ ဒီလို အရေးအခင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာ သက်သေပြနိုင်ဖို့ ဆိုတာက တော်တော်ခဲယဉ်းတဲ့ ကိစ္စရပ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ အစောက ပြောသလိုမျိုး။ ဒေါက်တာထွန်းအောင် ကို အခု ပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေမှာ ဒေါက်တာထွန်းအောင်ကိုယ်တိုင် လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေ၊ မြန်မာအစိုးရ ပြုတ်ကျ အောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတာလိုမျိုးတွေ ဓါတ်ပုံတောင် မတင်ပြနိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီ နှုတ်သက်သေခံချက်တွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ အပြစ်ပေးခဲ့တာတွေက ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်တိုက်ဖြစ် လာခဲ့တာ အခုအချိန်အထိပါ။ အဲဒီတော့ ဒီ အရေးအခင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ တကယ်တမ်းသာ ခုခံချေပခွင့်လည်း ပေးမယ်။ တရားခံတွေရဲ့  ဥပဒေအရ ခံစားခွင့်တွေကိုလည်း လိုက်လျောမယ်ဆိုရင်တော့ အမှုတော်တော်များများမှာ တရားခံတွေက အပြစ်မရှိဘဲနဲ့ အပြစ်ပေးခြင်း ခံထားရတယ်လို့ ကျနော်အနေနဲ့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါက ကျနော်က ရခိုင်ဖြစ်လို့၊ ဘင်္ဂလီဖြစ်လို့ ဒါတွေကို ကျနော် ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးက အဲဒီလိုမျိုး ထင်ကြေးတွေနဲ့ အပြစ်ပေးခြင်း ခံထားရတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ သတင်းတွေ ရရှိထားပါတယ်။
This entry was posted on February 3, 2013, in ဥပဒေ, ဆောင်းပါး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← World must pay attention to Rohingyas persecution and killing: James Jennings